Somaliland oo Kaarayaal ku daabuleysa deegaanka Tuka Raq. – Madal Furan
Hoy > Warka > Somaliland oo Kaarayaal ku daabuleysa deegaanka Tuka Raq.
Somaliland oo Kaarayaal ku daabuleysa deegaanka Tuka Raq.
Laascaanood (Madal Furan) – Goobjoogayaal ku sugan magaaladda Laascaanood ayaa Madal Furan u sheegay in ay arkeen gaadiidka xambaara Kaarayaasha oo maraya Bariga magaaladda Laascaanood.
Kaarayaashan ayay sheegeen in laga keenay deegaanka Oog ee maamulka Somaliland, kuwaasoo ku sii jeeday aaga ay fadhiyaan ciidamadda Somaliland ee Tuuladda Tuka Raq.
Warku wuxuu intaas ku darayaa ciidamadda Somaliland ay cabsi ka muujiyeen abaabul ciidan iyo hubka Tiknikada ah oo maamulka Puntland ku soo daabulayo aaga hore ee tuuladda Tuka Raq.
Taliyaha ciidamadda Soomaaliland Nuux Ismaaciil Taani oo ay weheliyaan qaar ka tirsan hogaamada ciidamada Somaliland ayaa xalay soo gaaray magaaladda Laascaanood, wuxuuna uga sii gudbay maanta dhinaca Tuuladda Tuka Raq, halkaasoo uu kula kulmay ciidamada Somaliland.
Taliye Taani ayaa la kulmay ciidamadda dhufeyska ku jira ee maamulka Soomaaliland wuxuuna uga mahad celiyey wax uu ku tilmaamay shaqada adage e ay hayaan.
Waxaa kaloo lagu soo waramayaa inuu kulamo gaar gaar ah la yeeshay Saraakiisha sar sare ee ciidamadda kuwaasoo uu ka dhegeystay warbixino la xiriira deegaanka ay ku sugan yihiin iyo xogaha ay ka hayaan dhinaca ka soo horjeeda ee Puntland.
Dhinaca kale ciidamadda Puntland oo la sheegay inay aad uga tiro badan yihiin kuwa Soomaaliland ayaa iminka waxay ku sugan yihiin Saddex aag oo uu ka mid yahay Aaga Holhol oo ah dariiqa keliya ee u furan ciidamadda Somaliland haddii ay ku jabaan dagaalka ay qorsheyteen in Tiknikadooda ay kula baxsadaan.
Dadka wax odorasa ayaa carabka waxay ku adkeynayaan inuu muuqdo abaabul ballaaran oo Labada Maamul ku habeynayaan ciidamadooda, taasoo soo dedejin karta dagaal dhaqso u dillaaca.
Sharciga Batroolka ee Soomaaliya ma wuxuu holac ka dhex shiday Soomaaliya iyo dalalka deriska la ah?
Nin Muslimiin masaajid ku laayay oo dambigiisa qirtay
Abiy Ahmed oo la filayo inuu Jimcaha booqan doono dalka Suudaan